अभावै अभावमा स्थानीय न्याय समिति | Epradesh Today
Homeफिचरअभावै अभावमा स्थानीय न्याय समिति
स्थानीय तहमा स्थानपना गरिएका न्यायिक समितिहरु अहिले जुरुमुराउन थालेका छन् । कतिले गति लिएका छन् भने कतिले अलमलमै एक वर्ष बिताएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउ“दै दिइएका अधिकारहरुमा जनप्रतिनिधि पनि अन्यौल देखिएका छन् । दाङका स्थानीय तहहरूमा रहेका न्यायिक समितिहरू आफूहरुले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने कस्तो प्रकारले समितिलाई क्रियाशील बनाउने भन्ने विषयमा अलमलजस्तै देखिएको न्याय समितिका संयोजकहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्थानीय तहको उप–प्रमुखको जिम्मामा रहेको न्यायिक समिति न्याय सम्पादनमा जति हुनुपर्ने हो त्यति अग्रसर देखिएको छैन । न्याय कसरी दिने र न्यायिक प्रक्रियालाई कसरी अवलम्वन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता भएपछि स्थानीय न्याय मूर्तिहरु अलमल बनेका छन् । यही विषयलाई लिएर प्रदेश टुडेको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका उप–प्रमुख (न्याय समिति संयोजक) हरूस“ग संवाद गरेका छौं । उनीहरूले स्थानीय न्याय सम्पादनमा भएका जटिलता र सरलताका बारेमा टुडे राउण्ड टेबलमा राखेका विचारहरूका सम्पादित अंश ।
प्रकाश डाँगीको संयोजनमा तुलसीपुरबाट नीता चौधरी, घोराहीबाट सपना बोहरा, जीतसागर जिएम, देउखुरीबाट प्रिया स्मृती गजमेर र गढवाबाट दुख हरण यादव
संरचना अभावले समस्या
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको न्यायिक समितिमा ४१ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । पछिल्लो अवस्थामा न्यायिक समितिमा दर्ता हुने निवेदनको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, कुलोपानी, लेनदेन, बाटो विवादका गरी ४१ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । ४१ वटा निवेदनमध्ये ९ वटा निवेदनमा छलफल गरी अन्तिम टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेको छ ।
संरचना अभावका कारण समितिमा आएका निवेदनमा छलफल गराउन समस्या छ । उपमहानगरपालिकाभित्रै न्यायिक समितिले छलफल गराउने भवन बन्यो भने निवेदन छलफलमा सहज हुनेछ । हाल भवन अभावका कारण पनि हामीलाई फुर्सद भएको दिनमा मात्र छलफल गर्ने गर्छौँ । न्याय सम्पादनको लागि कानूनको ज्ञानलाई सहयोगी राख्न पाए सहज हुने थियो ।
नगर प्रहरी नहुँदा समस्या
सीता न्यौपाने सिग्देल
घोराही उपमहानगरपालिकामा रहेको स्थानीय न्यायिक समितिमा धेरैजसो लेनदेनको मुद्दाहरु पर्ने गरेका छन् । हामीले २० लाखसम्मको लेनदेनको मुद्दासमेत मिलाएको छौँ । त्यस्तै जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, कुला नालाहरुमा विवादहरु धेरै नै आउने गर्छन् । दिनमा १० वटा मुद्दाहरु दर्ता हुने गरेका छन् । यो न्यायिक समितिले हप्तामा दुई दिन मुद्दाहरु फैसला गर्ने गरेको छ । हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार धेरै मुद्दाहरु फैसला हुने गर्छन् । हामीले दुबै पक्षलाई बोलाएर न्याय दिने गरेको छौँ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका मुद्दाहरु पनि यो न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । अदालतबाट मुद्दा जितेका तर उपभोग गर्न नपाएकाहरु पनि न्यायको लागि आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि हिंसापीडित महिलाहरुले मुद्दा जितेर जग्गा उपभोग गर्न नपाएका, लिनु पर्ने पैसा नपाएकाहरुले यो न्यायिक समितिमा पीडक पक्षलाई बोलाएर किस्ता–किस्तामा भएपनि पैसा तिर्ने वातावरण मिलाएका छौँ ।
१४ वर्षको उमेरमा एकजना बालिकालाई भर्खरै मात्र जन्मदर्ता गराइदिएका छाँै । सेवाग्राहीहलाई सयममै न्याय दिएर फर्काएका छौँ । न्यायिक समितिमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको हामीसँग नगर प्रहरी छैनन् । न्यायिक समिति पीडितले मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडकलाई पत्र पठाउँदा यहाँ उपस्थिति नहुँदा मुद्दा फैसला गर्न समस्या देखिएको छ । हामीसँग कम्तीमा पनि नगर प्रहरी भएको भए प्रहरीको सहयोगमार्फत पीडकलाई न्यायिक समितिमा लिएर छिटो समयमा नै फैसला गर्न सहज हुने थियो ।
उप–प्रमुख: लमही उपमहानगरपालिका
लमही नगरपालिकामा झन्डै एक सयको हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा आफूलाई जानकारी नहुँदा काम गर्न गाह्रो छ । अहिलेसम्म लमही नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २२ वटा सामान्य मुद्दाको पmच्र्याैट गरिसकेको छ । मुख्यत कर्मचारीको अभावका कारण पनि न्यायिक समितिमा काम गर्न गाह्रो छ ।
मुद्दा कसरी फच्र्यौट गर्ने भन्ने बारेमा आजसम्म कुनै पनि तालिमको आयोजना नभएको र सहभागी हुन नपाएकोले पनि समस्या छ । जनताका आशा धेरै छन्, सबै पूरा गर्न गाह्रो छ तर पनि समस्या लिएर आउनेलाई जसोतसो मिलेर पठाएका छौ । वैधानिकरुपले कानूनी सल्लाहकार राख्ने कुरा भएपनि प्राविधिक समस्याका कारण राख्न नसक्दा समस्या देखिएको छ ।
न्याय सम्पादनको काम जटिल
मैले न्यायिक समितिको जिम्मेवारी बहन गरिसकेपछि अहिलेसम्म गाउँपालिकामा २५ वटा जति विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । अहिलेसम्म त्यस्ता जटिल समस्याहरु आएका भने छैनन् तर पनि त्यस्ता केही समस्या भने नआएका भने होइनन् । तर तिनलाई ब्यवस्थापन गरेका छौँ । जस्तो श्रीमाण श्रीमती बीचको असमझदारीलाई लिएर थुप्र्रे समस्याहरु आउने गरेका छन् । जसलाई आफूहरुले छलफल गरेर एकअर्कालाई सम्झाई बुझाई अदालतसम्म पठाउन नर्पनै वातावरणको सृजना गरेका छौँ । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको जग्गासम्बन्धीको विवाद हो सामान्यभन्दा पनि सामान्य लाग्ने आँठासानीको विषयलाई लिएर मनिसहरु आउने गर्छन् त्यसलाई पनी आफूहरुले आफूले जाने बुझे अनुसार समाधान गर्ने गरेका छौँ ।
‘हेर्नुस् न्याय सम्पादनको काम भनेको आफैमा जटिल छ, तर पनि आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर सकेसम्म आफूलाई जिम्मेवार बनाएर काम गरेका छौँ । त्यही पनि यो काम चानचुन भने छैन । कतिपय अवस्थामा कानूनी प्रकृया थाहा नहुँदा थुप्रै झन्झटहरु व्यहोर्नु परेको छ । न्याय निरुपणसम्बन्धी कुनै जानकारी नदिएरै न्यायिक समितिको जिम्मेवारी दिदा आफूहरुलाई मुद्दा किनारा लगाउन समस्या हुँदै आएको छ ।
कानून विज्ञको परामर्श लिएर काम
उपाध्यक्ष– राजपुर गाउँपालिका
राजपुर गाउँपालिकामा प्रायः मधेसी समुदायका मुद्दा बढी आउने गरेको छन् । उसो त भेगीय हिसावले थारु र यादव समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको छ राजपुर गाउँपालिकामा । अहिलेसम्म गाउँपालिकामा ४१ वटा सामान्यखालका मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनको कार्य सुरु गरेपछि गाउँघरमा हुने सामान्य खालको मुद्दाहरु आउने गरेका छन् ।
बाटो निकासको विवाद, जग्गा विवाद, पानी कुलाको विवाद , अंशवन्डाजस्ता विवादका मुद्दाहरु गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । गाउँपालिकामा अहिलेसम्म करिब ३१ वटा सामान्य खालका मुद्दा फच्र्याैट भैसकेका छन् । कानूनको बारेमा नजान्दा पनि यस्ता प्रकारका मुद्दा मिलाउन आफूहरुलाई गाह्रो भएको छ । तर कानून विज्ञको परामर्श लिएर काम गरिरहेको छु ।
मुद्दा पनि पार्टीगत भएर आउँछन्
उपाध्यक्ष– राप्ती गाउँपालिका
राप्ती गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भए यता १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । न्यायिक समिति गठन हुनुपूर्व पनि धेरै मुद्दा आए तर हामीले दर्ता नगरिकनै समाधान गरेर पठायौँ । तर अब जति आउँछन्, त्यति नै दर्ता गरेर अभिलेख राखेका छाँै । राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडामा मेलमिलाप समिति छ । प्रायः विवाद मेलमिलापकै प्रक्रियाबाट टुङ्गिएका हुन्छन् र नमिलेका विवादहरु न्यायिक समिति कहाँ आइपुग्छन् । न्यायिक समितिमा पनि मिल्न नसकेका मुद्दाहरु अदालत कहाँ जाने हो । न्यायिक समिति गठन भएको एकवर्ष हुनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म पनि कुनै तालिममा सहभागी हुन पाएका छैनौ ।
न्याय सम्पादनको काममा जनप्रतिनिधिलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले प्रत्येक स्थानीय तहमा कानूनी सल्लाहकारको ब्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये राप्ती गाउँपालिकाले पनि एकजना कानूनविज्ञ अधिवक्ता राखेको छ र काम गर्न सहज केही सहज छ । न्याय सम्पादनको काम जति झन्झटिलो कुनै रैनछ, मुद्दा पनि पार्टीगत भएर आउँदा झन समस्या हुन्छ । जुन पार्टीको मान्छे मुद्दा लिएर आउँछन्, त्यसै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले ल है यो केस माथि पठाउन हुन्न यतै मिलाउनु पर्छ भनेर दबाब दिने गर्छन् । तर हामी हाम्रो नियमसंगत काम गरेर पठाउने गरेका छौँ । कतिपय विवाद मिलिसक्या हुन्छन् । फेरी बाहिरको मान्छेले उस्काइदिदा फेरी त्यही विवाद लिएर आउँछन् । जसले गर्दा अन्य विवादलाई असर परिरहेको हुन्छ ।
कानूनी दक्षताको अभाव खड््किन्छ
उपाध्यक्ष– शान्तिनगर गाउँपालिका
हेर्नुस् हिजो सामाजिक कार्य गरेको मान्छे अहिले आएर न्याय सम्पादनको काम गर्दा के समस्या भोग्नु परेको होला तपाईहरु आफैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । अहिलेसम्म आफ्नो गाउँपालिकामा चारवटा मात्र विभिन्न किसिमका मुद्दा दर्ता भएका छन् । थोरै मुद्दा दर्ता भएकै कारण काम गर्न केही सहज भने छ । यदि मुद्दाको संख्या बढेर आए भने त काम गर्न सजिलो भने पक्कै छैन ।
न आफूहरु कानूनकोे विद्यार्थी परियो तर पनि कानूनको पूरै जानकार भएजस्तो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आफै सोच्नुस् यस्तो अवस्थामा काम गर्न कति सजिलो होला भनेर ? पर्याप्त तालिम तथा प्रशिक्षणविना काम गर्दा कस्ता समस्या झेल्नुपर्ला त्यो सबैले थाहा पाउने कुरा हो । तर पनि स्थानीय प्रहरी अन्य जनप्रतिनिधि र गाउँका समाजसेवीहरुले राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ । जसले गर्दा केही सहज भने छ ।
न्यायधीसको भूमिका कठिन
उपाध्यक्ष– बबई गाउँपालिका
आफ्नै ठाउँका मुद्दा छिनोफानोमा न्यायाधिश भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दा विभिन्न खालका समस्याहरु झेल्नुपरेको छ । तर पनि आफूहरुले पाएको जिम्मेवारी एउटा अवसरलाई बहन गर्नपछि पर्नु हुन्न भनेर काम गरिरहेका छौँ । विभिन्न समस्या रहेका नागरिकहरु स्थानीय तहमा न्याय मिल्छ भनेर बिस्तारै आउने गरेका छन् । विस्तारै यो संख्या बढ्न पनि थालेको छ । हालसम्म बबई गाउँपालिकामा ५५ वटा विभिन्न किसिमका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् केहीलाई किनारा लगाईसकेका छौँ, केही किनारा लगाउन बाँकी छ । न्यायिक प्रणालीबारे ज्ञान नहुँदा कतिपय अवस्थामा काम गर्दा निकै समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ ।
‘आफूहरुले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्म ज्ञान, सीप भएअनुसार न्याय दिने प्रयास गरेका छौँ । तर कतिपय अवस्थामा कानूनसम्बन्धी जानकारी नहुँदा आफूहरुलाई समस्या हुँदै आएको छ । पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । कार्यविधिा उल्लेख भए अनुसार अभिलेख प्रशासक, उजुरी प्रशासक हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पनि त्यो उपलब्धता छैन । आफूहरुको सबै समय यसैमा खर्चिनु पर्ने समस्या रहेको छ । छलफल गराउने त्यस्तो कुनै छुट्टै स्थानसमेत छैन । अर्को कुरा आफूहरुलाई कसरी न्याय प्रवाह गर्र्ने त्यो सम्बन्धमा कुनै तालिम तथा प्रशिक्षणसमेत हुन सकिरहेको छैन् । जसले गर्दा आफूहरुलाई थुप्रै समस्या रहेको छ ।
स्थानीय तहको अदालत हो
हाम्रो न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ८५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३५ जति मुद्दा मिलिसकेका छन् । सुरु–सुरुमा त कानूनको बारेमा थाहा नहुँदा धेरै गाह्रो भयो । अब चाहिँ काम गर्दै जाँदा सहज हुँदै गाएको छ । न्यायिक समितिमा अधिकांश जग्गा विवादका मुद्दाहरु आउने गरेका छन् । त्यसैमा पनि ऐलानी जग्गाका बढी हुन्छन् । न्यायिक समिति भनेको स्थानीय तहको अदालत नै हो जनतालाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ ? हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेकै जनतालाई न्याय दिनु हो ।
अर्को कुरा न्याय सम्पादनको काम गर्दा इजलास कोठा छैन । जसले गर्दा आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर गर्नुपरेको छ । कतिपय विवादहरु आउँदा राजनीतिक रुप लिएर आउने गर्छन् । हाम्रो केस यतै मिलाउनुस् है भनेर तनाब दिन्छन् । तर हामी हाम्रो जिम्मेवारी सम्झेर काम गर्छौँ । सुरुमा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा कानूनको विज्ञसँग परामर्श लिएर विवाद मिलाउँथ्यौ, नमिलेका विवाद कता पठाउनु पर्ने हो बुझेर त्यतै पठाउथ्यौँ । अहिले एक महिना जति भयो एकजना कानूनी सल्लाहकार राखेका छौँ केही सजिलो भएको छ । स्थानीय तह जनताको अदालत हो । जुनसुकै बेला अप्ठेरो पर्छ, गाउँपलिकाको कार्यालयसम्म आएर आफ्नो दुखेसो पोख्न सक्नुहुने छ । हामी जतिबेला पनि जनताको हित र न्यायको लागि काम गर्न तयार छौ ।
सीप र दक्षताको विकास गर्नुपर्छ
यो गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ वटा मुद्दामध्ये अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा रहेका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका २७ मुद्दामध्ये करिब २१ वटा मुद्दा फच्र्यौट भएको, दुईवटा मुद्दा अदालतमा पठाएको र बाँकी चारवटा फच्र्यौट गर्न बाँकी छन् । ‘सम्बन्ध विच्छेदपछि श्रीमान् श्रीमतीको झै–झगडाको घटनाका मुद्दा पनि आउने गरेका छन् । हालसम्म दुईवटा सम्बन्ध विच्छेद्दका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाएका छौँ, अरु सबै २१ वटा मुद्दा हामीले नै मिलायौँ ।’
धेरै मुद्दा वडामै मिलाउने प्रयास हुन्छ । त्यसपछि मात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दाहरुमा घरेलु हिंसा, झै–भगडा, सीमाना विवाद, चोरी, डकैती र सम्बन्ध विच्छेदलगायतका घटनाहरु रहने गरेको छन् । ‘हामीले अहिले कहिले आफ्नै कक्षमा मुद्दा फच्र्यौट गर्ने गरेका छौँ । कहिले बाहिर चौर, तथा छहारीमा पनि फच्र्यौट गर्ने गरेका छौँ ।’ दाङको कर्णाली भनेर चिनिने बंगलाचुली गाउँपालिकामा न्याय सम्पादन गर्नका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था नहुँदा समस्या छ । आफूहरुले सोचेजस्तो पर्याप्त तालिमको व्यवस्था छैन समस्या त निकै छ तर पनि मुद्दाहरु मिलाउने प्रयास गरेका छौँ ।